Mashoko Akavanzika Uye Masangano: Vanonyatsowedzera SEO Yenyu Here? - Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan Anopa The Answer
Zvinyorwa zvakavanzika uye zvinyorwa zvinogadzira zvinyorwa zvewebsite yako iyo inenge isingaoneki zvachose kuvanhu vanotakudza peji. Kune vanhu vanotakura chikwata chitsvuku SEO, mavara akavanzika inzira iyo yakawanda yehutungamiri webmaster inoshora. Zvisinei, zvinyorwa izvi zvinogona kuonekwa nemakombiyuta, uye saka inoumba chikamu chemashoko ekunyora - best security camera small business. Mifananidzo yakavanzika inonyengedza injini kuisa ruzivo rwewebsite ruzivo rwakanga rusingave rutivi rwekuona peji peji yehuwandu.
Ichitevera zvitsva zvitsva pakutsvaga kwegorgorithm, Google inogona kuona zvino zvakavanzika zvinyorwa. Nzvimbo yako yepaIndaneti inokonzera njodzi yekuwana chirango kubva kune injini yekutsvaga. Mumatambudziko akaoma, mamwe mazwi ezvinyorwa zvinokonzera spam tactics zvinogona kutungamirira kudzvinyirira zvachose kubva kune database yekutsvaga. The Content Strategist Semalt , Natalia Khachaturyan, anonyevera kuti munguva ichangopfuura yapfuura, mamwe mawebhusayithi anogona kukwirira kumusoro achishandisa zano iri asi kwete zvakare.
Nzira iyi inonyengera inogona kusanganisira vashandisi vepanzvimbo pane webpage mune fomu isingaoneki. Kune vanhu vanoita Search Engine optimization, zvinyorwa zvakavanzika hazvigoni kubatsira chero webhusaiti yepamusoro kuti iwedzere sezvo iri nyore kuona. Iko haina kuchinja pane
Kune nzira dzakawanda dzingashandiswa nevanhu kuvanza mashoko pane webpage. Kutanga, vamwe vanhu vanogona kushandisa magwaro ane mhando yakafanana kumberi. Somugumisiro, ruzivo urwu harwuoneki kumunhu anotarisa peji yewebhu. Vamwe vanhu vanoshandisa zvinyorwa zviduku pane nzvimbo dzewebsite iyo pane bhaniri kana mamwe mashoko. Kuvhara deta nemutsetse kana chimwe chinhu kunogonawo kupa mawebhesi mashoko akavanzika.
Masangano akavanzwa anoitika semagwaro akavanzwa, kunze kwekuti kune permalinks mavari. Somugumisiro, mushumiri webhusaiti anogona kuona nzvimbo neklickable links dzisiri pachena kana dzinooneka. Hidden links hazviiti kune SEO kushanda kwewebsite. Kushamwaridzana kwavo hakubvumiri jisi rekubatanidza kuwedzera simba kumunda. Uyezve, nzvimbo inogona kutarisana nechikwereti kana injini yekutsvaga web crawlers ichiona dzakawanda dzakavanzika.
Kune webhusaiti yakadai se-e-commerce sites kuti zviite zvakanaka muhuwandu, pane chikonzero chekuisa zvinyorwa zvinooneka pane izvo zvisingaoneki. Mavhesi ose anowanikwa mujiji rako rewebhu rinofanira kuonekwa kumunhu. Inofanirawo kuva yakakonzerwa nehutano hwose hunoonekwa. Kuti uone kuti zvakavanzika zviri pasi peji yewebhu, unogona kusimbisa zvose kuburikidza ne ctrl + A basa kana kushandisa shanduko. Mune mamiriro ezvinhu apo iyo yakasimbiswa ine mararamiro akafanana nechekumashure, shandisa ctrl + C uye unyore kuti zvinyorwa zvezwi kushandura peji peji uchishandisa mhemberero chete yekunyanya kusarudza. Iwe unogona kubva wongorodza zvinyorwa pamwe chete neshamwari dzakavanzika dzinoratidza se permalinks.